Waxsoosaarka ugu Wanaagsan ee GW14T16 Isku-darka Mashiinka iyo Badeecadaha | GAOGE
GW14T16 Isku-darka Miisaanka-madaxa badan
GW Series Multihead Weigher wuxuu ku haboon yahay miisaamida shaaha, abuurka, digirta kafeega, digirta shukulaatada, sabiibta, Qalabka iyo caaga Qaybaha iwm. oo leh culeys weyn oo bartilmaameed ah.
Miisaannada badan ee madaxa loo yaqaan 'multihead' ayaa ah aalado madax-bannaan, kuwaas oo sida caadiga ah lagu dhejiyo mashiinnada wax lagu baakadeeyo oo ay isla shaqeeyaan iyaga. Shaqada ugu weyn ee qalabka qiyaasta daawada ayaa ah kala soocida badeecada oo lagu qiyaaso qiyaaso horay loo sii qeexay, oo ay dejiyaan howlwadeenka mashiinka. Qiyaasta diyaarka ah ayaa markaa lagu quudiyaa mashiinnada wax lagu baakadeeyo.
Habka shaqada ee miisaanka culeyska badan:
Qalabka noocan ah ee qiyaasta daawada ah waxaa loo isticmaali karaa qiyaasta wax soo saar kasta oo ka sameysan granular iyo alaabooyin kale oo xaalad adag ku jira, oo ay ku jiraan kuwa leh qaab joomatari aan caadi ahayn. Guud ahaan, xarfaha badan waxay ka kooban yihiin kanaallo gariira, oo quudiya miisaanka miisaanka leh badeecad. Dulalku wuxuu ku dhegan yahay miisaanka culeyska, oo fuliya cabirka miisaanka badeecada. Si ka duwan miisaanka toosan, halkaasoo miisaanka go'an ee qiyaasta lagu gaarayo iyadoo la soo dejinayo hal hopper mulihead wuxuu gaarayaa hal qaadasho iyada oo laga soo dejinayo dhowr hoppers isla mar ahaantaana Noocyada noocan ah ee qiyaasta daawada waxaa lagu qalabeeyay algorithm gaar ah oo hubinaya tirada badeecada ku jirta halbeeg walba oo dooranaya isku darka ugu fiican ee jibbaaranaha oo ka soo dejinaya alaabta mashiinka baakadka. Sidan, waxtar aad u sareeya iyo saxsanaanta qiyaasta ayaa la gaaraa. Multiheadhead waa qalabka kaliya ee qiyaasta daawada ee dammaanad qaadi kara saxsanaanta sare marka la qiyaasayo alaabada, halkaasoo miisaanka hal unug / halbeeg ka badan yahay 5-6 g.
Ku habboon qiyaasta alaabooyinka granulated ee ku jira xaalad adag, oo ay ku jiraan alaabooyinka leh qaab joomatari aan caadi ahayn. Miisaanka culus ee badan ayaa si gaar ah ugu habboon shaqada alaabooyinka, halkaasoo culeyska hal xabbo uu ka badan yahay 5-6 g. Waxaa loo isticmaali karaa buskudka, miraha la qalajiyey, macmacaanka, waffles-yada, alaabooyinka la qaboojiyey, jellayda, baastada, cunnada fudud, granola, jibbaarada, lowska, buskudka, mini-croissants, shiilan faaruq
Waxqabadka ugu muhiimsan & Astaamaha:
1. Qalabka miisaanka dhijitaalka ah ee mihnadlaha ah ee saxsanaanta iyo xasilloonida wanaagsan.
2. Nidaamka xakamaynta: MCU ama PLC (ikhtiyaar).
3. Taabashada shaashadda taabashada waxay leedahay heerar kala duwan oo marin loo oggol yahay; ilaa 16 luqadood oo kala duwan oo xulasho ah; barnaamijka software lagu casriyeeyay iyada oo loo marayo USB.
4. Qalabka soosaarka warshadaha soo kabashada; 99 xuduudaha alaabta horay loo sii deynayo si loo buuxiyo shuruudaha barnaamijka halbeegga kala duwan.
5. miisaanka miisaanka leh oo awood u leh inuu sii daayo markiisa si uu si wax ku ool ah uga hortago alaabooyinka inay xannibaan.
6. Miisaanaynta iyo tirinta shaqada si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha.
7. Muujinta dhabta ah ee muujinta baaxadda digsi gariir kasta iyo sidoo kale miisaanka wax soo saarka ee hawo kasta si aad si fiican ugula socotid xaaladda mishiinka.
8. Mashiinka jirka oo leh SUS304 / 316 xulasho; IP65 boorka iyo naqshadeynta biyuhu.
9. Hawlaha nadaafadda: awood u leh inay ka dhigto qotoma furitaanka gobolka furfurnaan sahlan oo nadiifin maalinle ah iyo dayactir ah.
10. Naqshadeynta qaabdhismeedka nidaamka xakamaynta dayactirka fudud iyo kharash-badbaadinta.
11. Si gaar ah loogu talagalay alaabada yaryar ee granular oo leh saxnaan sare iyo xawaare shaqo oo deg deg ah.
12. Cabbirka is haysta ee keydinta booska.
Dhismaha Bir aan xadi lahayn AISI 304
Wax soo saar 65/120 qiyaaso daqiiqadii
Wadid Qalabka birlabta DC + matoorrada tallaabada
Qiyaasta qiyaasta 10-800g
Xakamaynta MCU, Taabashada shaashadda
Saxsanaanta ± 0,1-1g
Awood rakibay 1500W / 2000W
Koronto 220V ± 10%
Miisaanka 370 / 450kg
Luqadaha la taageero Ingiriis
Awoodda Hoppers 1,6L (2,5L ikhtiyaari ah)
Nooca koorta qaybisa Gariirka ama wareega
Hore: GW10T16 Multihead Weigher
Xiga: GW14T25 Multihead Weigher
GW30T08 Isku-darka isku-dhafan ee madax-badan